I-reputology: Uhlelo Lwesaziso Lokubuyekezwa Kwe-inthanethi | Martech Zone
I-reputology: Uhlelo Lwesaziso Lokubuyekezwa Kwe-inthanethi
NgoLwesine, ngo-Okthoba 10, 2013 NgoLwesine, ngo-Okthoba 10, 2013 Douglas Karr
Sisanda kwabelana ngezibuyekezo zethu eziku-inthanethi nokunye ubuchwepheshe bunomthelela embonini yokudlela. I-Internet is ithuluzi le-goto lokuqinisekisa izinkampani zensizakalo, izindawo zokudlela, nabanye abathengisi. Ubufakazi iyinkundla yokuqapha nokubika yokubukeza. Ithumela izaziso ze-imeyili noma nini lapho othile ehlaziya ibhizinisi lakho ku-Yelp, ku-Google + Yasendaweni, ku-Tripadvisor nakwamanye amasayithi wokubuyekeza. Ngokuphendula ngokushesha, amakhasimende ethu angathola umbuyekezi ongajabule ukushintsha ingqondo yakhe i-70% yesikhathi.
I-Reputology Email Alert
Ngokombono wokuSebenza, i-Reputology yenza kube lula ukubona izingqinamba eziphindaphindekayo ngokuhlanganisa nokuhlaziya idatha yakho. Ithumela imibiko efingqiwe yamasonto onke / yenyanga efingqiwe, futhi ikunikeza analytics ukulandelela ukusebenza kwesibuyekezo sakho.
Phendula Ngokushesha - Thola izexwayiso ze-imeyili ezizwela ngesikhathi. Isixhumanisi esiku-imeyili sikukhombisa lapho isibuyekezo sivele khona ekuqaleni.
Gada Izindawo Eziningi - Izexwayiso zomzila kubantu abalungile & sebenzisa imibiko efingqiwe ukubona izingqinamba ezinomthelela kulo lonke ibhizinisi.
Landelela Ukusebenza Kwakho - Izibalo zenza kube lula ukuqonda ukuthi amamethrikhi angukhiye ahamba kanjani futhi aqhathanise izindawo.
Izinkampani zifana Uhlu luka-Angie (iklayenti lethu) linezaziso ngisho nokulamula ukusiza izinkampani zensizakalo ukuthi zixwayiswe futhi zilulame ezinkingeni zesevisi yamakhasimende… kodwa ezinye izingosi ezivulekile ezinjengokugijima okugcwele ukubuyekezwa okungamanga (Funda: Izinkampani eziyi-19 ze-SEO zisanda kuhlawuliswa eNew York).
Ukubhalisela izexwayiso zokubuyekeza kuyisinyathelo sokuqala sebhizinisi lakho lokuqapha nokuphendula kwizikhalazo… mbumbulu noma okwangempela!
Tags: I-Google + YendawoUkubuyekezwa okuku-inthanethiubuchwepheshebuyekeza isexwayisobuyekeza izibaloIzibuyekezoTripAdvisorYelp
Ithinta Kanjani Ubuchwepheshe Lapho Sidla Khona
Kungani i-Google Efihla amagama angukhiye Ilungele Abakhangisi